Nicolas Dupuis : nohalavaina ny fiaraha-miasa | NewsMada
Nicolas Dupuis : nohalavaina ny fiaraha-miasa
Taorian’ny fahavitan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, taranja baolina kitra, nohalavaina ho efa-taona indray ny fiaraha-miasa amin’i Nicolas Dupuis hanazarany ny Barea de Madagascar. Mandalo eto an-tanindrazana ity mpanazatra ny Barea de Madagascar ity ary noraisin’ny minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, i Tinoka Roberto, teny amin’ny birao fiasany eny Ambohijatovo, ny talata lasa teo.
Ankoatra ny firesahana ity fiaraha-miasa vaovao aminy ity, nodinihin’ny roa tonta ihany koa ny fanomanana ny fifanintsanana ny “Can 2021” sy ny fifantenana ireo mpilalao handrafitra ny Barea, indrindra fa ireo mpandimby. Nanaovan’ny roa tonta jery todika ihany koa ny lasa ka niarahana nijery ny vahaolana hisorohana ireo tsy nety niteraka resabe, teto amin’ny firenena.
Tanjona amin’ity ny hihoarana ny vokatra tsara efa azon’ny Barea de Madagascar, araka ny nambaran’ny minisitra. Nampanantena kosa i Nicolas Dupuis fa mbola hanome ny tsara hatrany ho an’ny baolina kitra malagasy.